မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ငလျင်ဒဏ်ခံရနိုင်ဖွယ်ရှိ...! - Thadin
May 16, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ငလျင်ဒဏ်ခံရနိုင်ဖွယ်ရှိ…!
(၂) မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာဆိုရင်ဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေဖြင့်အများဆုံးခံရဖွယ်ရှိပါတယ်။ရစ်ချက်တာစကေး၉– ၁၀အထိအောင်လှုပ်နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြောဖြင့်၆–၇မိုင်လောက်ကပ်လျှက်ရှိနေသောမန္တလေးအနောက်ဘက်ခြမ်းပိုင်းမှာတော့မြေပျော့များဖြစ်သည့်အလျောက်အပျက်အစီးပို၍များပါမယ်။ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်၈၅–၈၆လမ်း၏အရှေ့ဘက်တွေကပို၍အပျက်အစီးများနိုင်ပါတယ်။
(၃) နေပြည်တော်အနေဖြင့်တော့ပျဉ်းမနားထက်စာလျှင်ပို၍ခံရဖွယ်ရှိပါတယ်။ပျဉ်းမနားကစစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြောနှင့်၁၀ မိုင်လောက်နီးကပ်ပေမယ့်နေပြည်တော်၏တစ်ချို့နေရာတွေက၁–၂မိုင်လောက်အထိကပ်နေတဲ့နေရာတွေရှိနေပါတယ်။ငလျင်အန္တရယ်ကြီးမားစွာခံရနိုင်ဖွယ်မှာရှနေပေမယ့်အထပ်မြင့်အဆောက်အဦးများရှိမနေခြင်းကြောင့်ဘေးကျရောက်မှုတော့နည်းပါလိမ့်မယ်။
Credit:Daily Hot new
တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း . 16.5.2019 မှ 22.5.2019 အထိ…!
မထော်မနန်းတွေလုပ်မိလို့ Mobile Legends ကစားခွင့် နှစ် ( ၃၀ ) အပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ကလေး…!
This Month : 37296
This Year : 232694
Total Users : 591718
Views Today : 8755
Total views : 2714647